Mootummaan Team Lammaa of keessaa qulqulleesse mootummaa akkamii akka ta’e kan gaafatu waan jiru natti hin fakkaatu. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMootummaan Team Lammaa of keessaa qulqulleesse mootummaa akkamii akka ta’e kan gaafatu waan jiru natti hin fakkaatu.
“Obbo Dassa Bulcha fi Obbo Mohammednur Mana Murtii Waliigala Oromiyaa irraa ari’amuu isaanii quba qabduu? Maaliif ari’aman?
1) Jarri kun lameen sabboonummaa fi quuqama Oromummaa qabaniin Lammaa Magarsaa internationaal NGO keessaa yaamee muude. OPDO keessas hin turre, bilxiginnaas hin beekani.
2) jarri kun lamaan ABO keessa turani jedhanii hamatuun.
3) Maqaa olaantummaa seeraa jedhuun Qeerroon seeraa ala yoo caasaa bulchiinsaan hidhaman sirrii miti jedhanii hiikani jedhaniitu irratti ololaa bahani. Siyaasa ABO deeggaru jedhunii.
4) jarri kun ergamtoota miti. Nama jala hin deemani.
5) Hidhaa fi ajjeechaa bilxiginnaan kaluu tana eegalte cimsitee itti fufuuf jara kana ari’uu qabdi ture.
6) Hubachiisa: Haroomsa wanti jedhamee ture poolisaa fi mana murtiin bilisa akka ta’u waan Lammaan godheef ture. Lameenuu bara Shimallis Abdiisaa ajaja Abiyyiin duubatti deebifamaniiru. Polisni ergama bilxiginnaa akka fudhatee akka Oromoo waraanuu fi hidhuuf godhamaa jira. Manni murtiis kunoo akkas ta’e.”
“Akkam Nagaa Ooltee Obbo Yaayaa.
Har’a magaalaa Jimmaatti shira hojjetame tokkon sitti hima. Ijoollee dheengadda qarshiidhaan bituun gara Adaamaatti erguun Taayyee Danda’aa irraa qajeelfama fudhatan Kantiibaan Magaalaa Jimmaa fi Kaadiroonni gandaa maryachiisaa oolan. Party kamiyyuu akka Magaalaa Jimmaa keessatti hin keessummeessineefi PP qofa akka ummanni deeggaru irratti jabaatanii duulan ajajaniiru. Waltajjii dhoksaa galma Keessatti walitti qabamanii odeesaaa oolan. Kan na ajaa’ibe qeerroon inni kaleessa Gaafa Abiy Noobeelii fudhatuuf gaafa inni filatamu halkan guutuu gammachuudhaan dhiichisaa ture har’a iccitii dhokfamuu fi Adamsamuu isaati. kanaafuu adeemsi isaan har’a joollee amanatan muraasa qofa walitti qabanii waltajjii kana gaggeessan warruma jara deeggaree lafa dhiitaa tureyyuu alagmoomsaa fi qoqqoodaa jiraachuu isaanii agarsiisa. Qeerroon jimmaa jara akkasii kanaan dogoggorfamuu osoo hin taane wal ijaaree irrattika’uu qaba.”
OROOKOO. Mohammednur Guye
Lammaa magarsaa ministera RAAYYAA ittisa Biyyaa ta’ee, raayyaan ittisa Biyyaa OROMIYAA akka fedhe godhee Saba kana otuu ajjeessuu otuu hiraarsuu waggaa tokkoo ol lakkoofsiisee jira.
Dhimmii waraanaa Kun lammaa magarsaa ajajuu hin danda’uu yookin lammaa hin ilaalatu erga jettannii,. Bakkii aangoo lammaan qabatee kaayyame sun yoo SABA AMHAARAA yookin saba TIGREEttif kenname oromoo maaliin miidhuu danda’aa,? Yookin maal nu fayyaduu danda’aa..?
Jawar midiyaa Ahadu jedhamu kan jibbiinsa Oromoo halkani fi guyyaa oofu gubbaa dhiyaachun maalif isa barbaachise? Akkuma warrii democrat tokko tokko Fox News gubbaa dhiyaataniti akka naan hin jenne. Fox News bar jibbiinsa hin oofu, warrii democrat jaalatu dhiisu danda’u garuu dhugaa jirtu hasawa. Midiyaan Habashaa afaan baasani kallattiidhaan jibbiinsa Oromoo lallabu. Midyaa akkasi gubbaa dhiyaachun ho’iisu malee homaa jijjirama fidu hin qabu. Akkamitti dhiyaachu danda’a Jawar? Mana isaatti, kaameraa OMNtiin waraabame gulaalame sur-sagaleen isaanitti keenname? Moo qarshii guddaa baasi godhani interview isa godhan?